1997 iyo 2017. waa isu soo egyihiin | allsanaag
1997 iyo 2017. waa isu soo egyihiin
1997, shirkii Beesha Majeeteen ay ku qabsadeen magaalada Qardho ee Gobolka Bari, oo ay ku doonayeen inay ku samaystaan maamul goboleed , waxa fashiliyey siyaasiyiinta beeshaas oo dhexdooda is khilaafay, taasina waxay sababtay inay xilligaas ay u kala dhuuntaan labadii hogaamiye ee beesha Hawiye ee Muqdishu ku suganaa, Caydiid iyo Cali Mahdi oo ay ka baryaan inay u kala noqdaan Ra’isawasaarayaal. Jawaabtii Cali Mahdi iyo Caydiid waxay noqotay kursiga Raisawasaaraha Soomaaliya waxa iska leh reer Waqooyi oo ay ula jeedeen Isaaq.
Marka arintu halkaa marayso ayaa sanadkii 1997, bishii november, waxa Soomaalida shir loogu qabtay magaalada Qaahira ee Xarunta Masar. Shirkan oo dawladda Masar ay shir gudoominaysay ayaa miiska waxay soo saartay in Soomaaliya madaxweyne uu ka noqdo Cali Mahdi , Caydiidna uu noqdo Raisawasarihiisa . isla markaasna Siyaasiyiintii beesha Hawiye sida Qanyare iyo Caato waxay diideen in shirka soo socda lagu qabto magaalada Boosasso ee gobolka Bari.
Marka xaalku halkaa marayo ayaa Siyaasiyiinta Cawad Casharo iyo Adan Gabyoow, shirkii isaga baxeen , waxaana ka daba yimid siyaasiyiintii Majeerteen oo hunguri ka sii ka qabay inay Raisawasaare u sii noqdaan dagaal Oogayaashii USC
Intaas ka dib, laga bilaabo bishii kowaad ee sanadkii 1998, oo shirkii Qaahira dhamaaday, ayaa waxa bilowday abaabulkii samaynta maamul goboleedka Puntland oo ay ku midaysan yiniih gobolada Sool, Sanaag, Bari, Nugaal iyo Mudug. Waxaana qayb libaax ka qaatay siyaasiyiinta ka soo jeedaY gobolada Sanaag iyo Sool Cawad Casharo iyo Maxamed Cabdi xaashi oo madax ka ahaa ururkii USP
Maanta mid la mid ah tii 1997 ayaa Soomaaliya ka socota , siyaasiyiintii Majeereen iyaga oo Madaxweyne doonaya sida Cabdiweli Gaas iyo Cumar Cabdirashiid ayeey Muqdisho doorasho u tageen, hase ahaatee Soomaali dhexdeeda waxay ka heleen dhowr cod, Madaxweynihii hore ee Puntland Cabdiraxmaan Faroole isaga oo Muqdisho jooga ayuu maanta la tartamay dagaal ooge. Waana looga adkaaday Soomaali dhexdeeda. Soomaali inteeda badnayd waxay raacday dagaal oogihii, Intooda badan Faroole aqoon iyo karti l’aan kuma diidin ee waxay kaga codeyeen xaqiiqdii waa beesha uu ka soo jeedo
Hadaba Su’aasha mudan in la is waydiiyo ayaa waxay tahay. Siyaasiyiinta Majeerteen ma jidkii khaldanaa ayeey ku sii socon doonaan mise isbedel siyaasadeed oo jiritaankooda ay ku badbaadiyaan ayeey samayn doonaan. Khaladka ay sameeyeen waxa ka mid ahaa Gaalkacayo oo ay dagaal ku qabsadeen ayeey ku soo casumeen kuwii xasuuqay. Maanta waa lagu haystaa oo lagu dilayaa. Lascaanood oo maqan ayeey lacag waxay ku bixiyeen in maamul goboleed Galmudug la yiraahdo ay sameeyaan. Puntland oo la wada dhistay ayeey hadda guri ay gaar u leeyihiin ka dhigteen. oo sida muuqata qarka u saaran inay burburto
Ugu danbayntii bulshada Puntland, waa dad walaalo ah oo nabad iyo walaaltinimo qarniyio ku wada noolaa oo ilbaxnimo leh, waa inay iska qabtaan siyaasiyiinta fashilka ah intaanay bur bur iyo colaad dhexdooda ah u keenin
← Wasiirkii waa soo laabtay. Gabdhiina waa la eryey Golihii Wasiirada Cusbaa oo Maanta La Dhaariyey →